www.camaloow.com - News: Ciidamo aan la Aqoonsan oo Weerar Cir iyo Dhul ah ku qaaday Degaanka Aw-dheegle..............
December 10 2018 04:31:24
Ciidamo aan la Aqoonsan oo Weerar Cir iyo Dhul ah ku qaaday Degaanka Aw-dheegle..............
<?php </a> Wararka ka imaanaya Gobolka Shabellaha Hoose ayaa sheegaya in xalay Diyaarado aan la ogeyn halka laga leeyahay ay Weerar ku qaadeen Saldhigyo Al-shabaab ay ku leeyihiin Degaanka Aw-dheegle ee Gobolka Shabellaha Hoose.
Wararka ayaa intaa ku daraya in Ciidamo ka soo Dagtay Saddex Diyaaradood oo ah kuwa Qumaatiga u kaca ay Weerar ku qaadeen Fariisimo ay Al-shabaab ku leeyihiin Degaanka Aw-dheegle ee Gobolka Shabellaha Hoose,waxaana Dagaalkaasi uu qaatay Mudo Sodon daqiiqo ah Xalay galinkii dambe,iyadoo ay jireen Duqeymo ay Diyaaradu Fuliyeen.
Dadka ku nool Degmada Aw-dheegle ee Gobolka Shabellaha Hoose ayaa sheegay in Ciidamada Weerarka ku qaaday Al-shabaab ay Adeegsadeen Hub Cul culus iyo Bulaleyr ay Cirka u tuurayeen.
Inkastoo aan wali la ogeyn halka ay ka socdaan Ciidamada Ajaanibta ah ee Weerarka ku qaaday Degaanka Aw-dheegle ee Gobolka Shabellaha Hoose ayaa Al-shabaab waxaa ay xaqiijiyeen jiri taanka Warkaasi.
Afhayeenka Xarakada Al-shabaab Sheekh C/casiis Abuu Muscab oo la hadlay Warbaahinta Al-shabaab Taageerta ayaa sheegay in Weerar Qorsheysan ay ku soo qaadeen Ciidamo Ajanabi ah,balse Shabaabku ay iska Difaaceen sida uu hadalka u dhigay.
· salaad on March 09 2016 · 0 Comments · 29001 Reads ·
Render time: 0.01 seconds 28,901,327 unique visits